Tabaha - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 2)
Haddii aad jeceshahay Photoshop aadna aad u isticmaasho burush, soo ogow kuwa ugu fiican burushka Photoshop ee bilaash lagu rakibo.
Ku cadaadi fiidiyowga
Haddii aad rabto inaad cadaadiyo fiidiyowga si culeysku u fududaado oo aad ugu diri karto internetka, waxaan ku siineynaa furayaasha aad si fudud ugu sameyso.
Sida fiidiyowga looga sameeyo gif
Ma dooneysaa inaad ogaato sida fiidiyowga looga sameeyo gif? Ha walwelin, halkan waxaan ku siineynaa barnaamijyo iyo codsiyo si aad ugu sameyso daqiiqado gudahood
Sawir dalag leh Sawire
Ma rabtaa inaad barato sida wax loogu beero sawir leh Sawirqaade? Waxaan ku siineynaa fursado dhowr ah si aad ugu gaarto hadba ujeeddadaada.
Sida looga gudbo JPG ilaa Word
Soo ogow sida looga socdo JPG ilaa Word dhowr ilbiriqsi gudahood iyo siyaabo badan oo kala duwan si aad u doorato midka kugu habboon.
Sida loogu khaldo asalka Photoshop, talaabo talaabo
Qoraalkan waxaan ku barayaa sida loo jahwareeriyo asalka sawirka leh 'Photoshop' iyadoo la adeegsanayo xeelad aad u fudud Akhri qoraalka!
Sida loo simo geesaha Photoshop loona hagaajiyo xulashadaada
Casharkaan waxaan ku bari doonaa xeelad aad u fudud oo aad ugu jilcin karto geesaha Photoshop isla markaana aad u hagaajisid xulashadaada. Ha moogaan!
U beddel sawirka pdf
Soo ogow sida ugu fudud ee loogu beddelo sawirka PDF iyadoo dhowr beddelaad la kala dooran karo. Dooro waxa ugu fiican dhammaan adiga!
U beddel eray jpg
Ma rabtaa inaad ereyga ugu beddesho jpg? Waxaan ku siineynaa furayaasha si aad u ogaatid qaab kasta iyo barnaamijyo kala duwan si aad u gaarto hadafkaaga.
Sida dukumiintiga PDF loogu beddelo ereyga
Haddii aad haysato dukumiinti PDF ah oo aad u baahan tahay inaad u rogto Ereyga, halkan waxaan ku siineynaa dhowr ikhtiyaar oo aad dukumiinti PDF ugu beddeleyso Word.
Sida loo badalo midabka Adobe Photoshop deg deg ah oo fudud
Ma rabtaa inaad barato sida loo beddelo midabka Photoshop? Gali qoraalkan oo baro tab si aad uga dhigto mid fudud oo dhakhso leh.
Haddii aad had iyo jeer dooneysay inaad aqoonsato nooc sawir ah, calan ... oo aadan ogeyn, hadda waxaan ku siineynaa furayaasha aad ku gaarto.
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad ku beddesho cirka sawir ee Photoshop hal guji
Suurtagal cusub oo ku jirta Photoshop si aad awood ugu yeelatid inaad cirka ku bedesho hal guji taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno isbedello heer sare ah.
Muhiimadda halabuurka rinjiyeynta
Waxaa jira farsamooyin taxane ah oo lagu gaarayo isku dheelitirka shaqadaada iyo in waxyaabaha ka kooban ay si fiican ugu habboon yihiin. Waa kuwan qaar ka mid ah.
Baro farsamooyinkan si aad u soo celiso alaabta gurigaaga oo aad u casriyeeyo
Ma rabtaa inaad cusbooneysiiso alaabadaas duugga ah ee aan wax dambe kuu sheegayn? Qoraalkan waxaad ku baran doontaa farsamooyinka dib u soo celinta alwaaxda kala duwan, aan tagnee!
Farsamooyinka aasaasiga ah ee lagu muujiyo kartidaada buuxda adoo rinjiyeeyay biyo-biyoodka
Rinjiyeyaal badan oo taariikhda soo maray ayaa lagu sasabay farshaxanka midab-biyoodka. Gali oo ogow dhammaan farsamooyinka aad codsan karto.
10 Xeerarka qaabeynta wanaagsan
Sheegida in nashqadeynta ay fiicantahay ama xun tahay waxay ku saleysan tahay sharciyo laga soo dejiyey khibrada iyo daraasada naqshadayaasha badan.
Iswaafaji midabada naqshadahaaga iyo Adobe Color CC.
Doorashada midabku maahan hawl fudud, sidaa darteed waxaan kuu keenaynaa qalab kaa caawin kara inaad hesho isku-darka ugu fiican, Adobe Color CC.
Nidaamka Grid, oo ah buug muhiim u ah qaabeynta
Nidaamyada 'Reticule' waa buug muhiim u ah naqshadeeyayaasha maxaa yeelay waxay amraysaa naqshadeyntayada waxayna siineysaa isku xirnaan iyo bilic. Wax badan ka baro isaga.
Bixi farshaxan kama dambeys ah, aqoon aasaasi ah
Waa inaan u geynnaa farshaxanka ugu dambeeya daabacaha. Iyaga ayaa lagama maarmaan u ah in natiijadu noqoto mid aan cillad lahayn. Waxaan ku barinaa inaad sameyso.
Squoosh waa barnaamijka cusub ee Google ee webka si loogu cadaadiyo sawirada iyadoon wax tayo ah lumin
Squoosh waa barnaamij cusub oo web ka ah oo ka socda Google kaasoo kuu oggolaanaya inaad isku-riixdo sawirrada adigoon luminaynin wax tayo ah oo ku saabsan habka cadaadiska
Muhiimadda samaynta Mockup wanaagsan
Si macmiilku u aqbalo naqshadeena waa inaan soo bandhigno wanaagsan. Baro sida loo helo mahadsanid mockup.
Gawaarida kumbuyuutarka si aad waqti ugu haysato Sawirka
Si loo go'aansado shaqada waa inaan isticmaalnaa tabaha. Waxaan ku baraynaa tuuryo kumbuyuutar si aad u keydiso waqtiga ugu badan ee suurtogalka ah.
Hayso dhammaan noocyada kumbuyuutarrada ee laga soo qaato barnaamijyada 'Creative Cloud 2018' ee leh muuqaalkan muuqaal ah
Haddii aad rabto inaad noqoto sayidka Photoshop ama Sawir-qaadaha waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad kala soo baxdo infographic-ka dhammaan khariidadaha kumbuyuutarka.
Miisaaniyadda mashruuca naqshadeynta
Waxaan ku barnaa tabaha si aad uhesho mashaariicdaada naqshadeynta dhaqaale ahaan, talaabada ugu horeysa waa inaad qiimo dhigto waqtiga shaqadeena.
Sida looga saaro daaqada xulashada muuqaalka midabka Adobe Photoshop marka aad furayso sawir
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka hesho waqtigaaga shaqada Photoshop, waad iska saari kartaa daaqadda xulashada midabka RGB markaad furayso sawir.
Ka samee soo jeedin ganacsi warbixin kooban
Warbixinta kooban waa dukumiinti u adeega soo saarida soo jeedin koowaad ee qeexitaanka mashruuca aan dooneyno inaan fulino.
Infographic, muuji naftaada aragti dheeri ah
Waxaad u baahan tahay farsamo si aad si waadix ah oo muuqaal ah ugu gudbin karto macluumaadka. Macluumaadka kooxda iyo xogta. Infographics-ka ayaa ah saaxiib wanaagsan.
Xayaysiiskayga ugu horreeya ee Google Adwords
Google AdWords waa aaladda xayeysiinta ee google. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto xayeysiis fudud. Haddii aad rabto inaad saameyn ku yeelato bartilmaameedkaaga dhagaystayaasha waa inaad isticmaashaa.
Doorashada farta saxda ah ee mashruuc
Doorashada qaabka saxda ah waxay muhiim u tahay sida midabada iyo qaababka uu naqshadeena u qaadanayo, talaabooyinkani waxay kaa caawin karaan inaad si sax ah u doorato
Qalabka wax soo saarka ee naqshadeeyayaasha
Naqshadeeyayaal badan ayaa u muuqda inay ku mashquulaan dhammaan kicinta ku soo socota jidka, qalabka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad diirada saarto hawshaada
Sida loo mashquuliyo iyada oo aan lagu mashquulin sida faa'iidooyinka
Hawlaheena shaqooyinka badan waxaa saameeya xubno kala duwan oo naga mashquuliya, farsamooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona
Maxaan uga baahanahay edbinta inaynu nahay hal abuur?
Haysashada edbinta maalinteenna waa mid muhiim ah, howlaha sida fudud sariirta loo hagaajiyo ayaa naga caawin kara tan, waxaan ku siineynaa talooyin aad ku gaari karto
Sida loo rogo fiidiyoow kumbuyuutarkaaga ama mobiilkaaga
Waxaan ku baraynaa sida loo wareejiyo fiidiyoow kombiyuutarkaaga ama mobiilkaaga oo leh xulashooyinka ugu fiican ee khadka tooska ah iyo codsiyada loogu talagalay Mac, Windows, iOS ama Android.
Waa inaan ogaanno lix amar oo khasab ah si aan u geyno kaarkaaga. Tobankan amar waxay faa'iido u yeelan doonaan soo jiidashada dareenka. Adiga oo tixgelinaya, in haddii aad kaar ku siisid maro-duug, ma noqon doontid tirada nasiibka leh
10 sharci oo hogaaminaya mashruuc hal abuur wanaagsan
10 Shuruuc si loogu hogaamiyo mashruuc hal abuur leh koox shaqo, abuurista jawi wanaagsan oo miyir qabta ah ee mashruuca gacanta lagu hayo, sida loo saameeyo, sida loo dhiiri galiyo iyo abuurida jawi aamin ah.
4 Tilmaamood oo noqda kuwa ugu horeeya mashiinka raadinta Google
Haddii uu jiro tartan ka dheer wareegga Formula 1, taasi waa tartanka raadinta Google. Tilmaamahan 4 ayaa kaa caawin doona inaad ku soo dhowaato booska koowaad oo ka bilaabmaya ururkaaga ganacsigaaga.
Tilmaamaha NTT-Toner si loo hagaajiyo shaqooyinkaaga hal-abuurka ah ee lagu daabacay mashiinnada Walaalka
Dhibaato ma kaa haysataa inaad noloshaada u keento mashruucaaga quruxda badan sababtoo ah daabacaaddaada cilladaysan? Maqaal ay qortay NTT Toner wuxuu sharraxayaa sida loogu helo daabacaha Walaalkaaga inuu aqoonsado gulufyada isku habboon
Abuur istuudiyaha naqshadeynta cajiibka ah si aad ula shaqeyso
Abuuritaanka daraasad naqshadeyn ah oo lagu xalliyo dhammaan dhibaatooyinka mustaqbalka ka dhalan kara way adag tahay, laakiin haddii aan raacno tilmaamo fudud waxaan si sax ah u saxi karnaa markii ugu horreysay, sida dhigista qaxwada.
Shantan barnaamij ayaa kaa badbaadin doona daalka hal abuurka ah
Daalka hal-abuurka ayaa caadi ah waqtigeenna. Baaxadda shaqo ee badan awgeed iyo culeyska nolosha mashquulsan awgeed. Waxaa jira codsiyo kaa caawin kara wax yar inaad ku xalliso daalkaas hal-abuurka ah ee lacag aad u yar.
Qalinka 500 ee Felissimo ayaa loo dhigay qayb ka mid ah qurxinta
Miyaad weligaa u malayn jirtay inaad haysatay qalin badan oo midabbo leh oo ay ceeb tahay in meel lagu kaydiyo ama miiska uun lagu caajiso. Maqaalkan waxaan ku tusinaynaa waxa calaamado qalin qalin midab leh ay sameeyeen si loogu muujiyo wax soo saarkooda qaab soo jiidasho leh.
Ku xir wareysiga talooyinka soo socda ee ku saabsan resumeygaaga
Ku xir wareysiga talooyinka soo socda ee resumeygaaga. Tan, waxaad ku dhowaan doontaa inaad saxdo oo aad u dhawaato shaqadaada.
Afar qalad oo qaan-gaar ah oo wiiqaya hal-abuurka carruurta
Afar qalad oo wiiqaya hal-abuurka tan iyo markii aan carruur nahay dadka waaweyn ee hareeraha naga jooga, iyagoo u maleynaya in aan la joogin xilligii la bari lahaa waxyaalaha qaarkood sababo la xiriira "xaddidooda".
Inaad u doorato degel websaydhkaaga sidoo kale waa hal abuur
Doorashada domain wanaagsan ee shirkaddaada waxay muhiim u noqon kartaa shabakadda. Haddii aan abuurno magac qaldan ama aan dooranno degel khaldan, weligeen waan khaldami karnaa
Sirta naqshadeeyayaasha waaweyn ee qaabeynta bogga oo qumman
Qaaciddada ay soo saareen qorayaasha qarniyadii dhexe iyo naqshadeeyayaasha casriga ah si ay u yimaadaan naqshadeynta qaabka bogga ugu habboon
Kala duwanaanta midabka: adeegsiga iyo isku darka
Soo ogow kala duwanaanta midabada leh tusaalooyinka isticmaalka iyo isku darka. Tababarku wuxuu sameeyaa mid dhameystiran isla markaana si dhakhso leh u aqoonsanaya nidaamka midabka bartilmaameedka wuxuu qaadanayaa tababar, waqti, iyo aqoon.
Sida loo barto sawirka
Barashada sida loo sawiro waxay ku xirnaan doontaa dadaalka uu qofku qaadanayo iyo dulqaadka iyo adkeysiga ku sii socoshada sawirka.
Sida loogu xumaado fiidiyoowga Adobe Premiere
Sida loo abuuro wareer fiidiyoow leh Adobe Premiere oo lagu gaarayo dhibcaha la xakameynayo ee qaybaha maqalka.
Maanta waxaan ka hadli doonaa shaambada loo yaqaan 'clone stamp', oo ah hab deg deg ah oo lagu daro ama looga saaro walxaha sawirka. Ma taqaanaa sida saxda ah ee loo isticmaalo?
HDR leh Photoshop
Baro inaad sawirro ku qaadatid farsamada HDR ee soo saarta faahfaahin badan iyo isbarbar yaac sawir ah. Waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo HDR Photohsop
Biyaha ayaa ku dhaca Photoshop
Dhibcaha roobku waxay noqon karaan kuwo dhab ah sida loogu sameeyay sawirrada qaarkood. Waxaan kuu sharxi doonaa sida loo ikhtiraaco, iyo sida looga dhigo kuwo dhab ah.
Weligaa ma dooneysay inaad ogaato sida aad ugu egtahay dabeecad TV ama filim? Casharkaan waxaan ku baraynaa inaad noqotid Hulk ...
Casharradan ayaa ku bari doonta inaad ku darto saamaynta hooska wajiga. Tan waxaa sidoo kale lagu dabaqi karaa qaybaha kale ee jirka meesha aad rabto inaad ka dhigatid
Trick si «safar»
Maanta waxaan baran doonnaa inaan safar ugu baxno meel kasta oo adduunka ka mid ah oo aad rabto, laakiin safarkan wuxuu noqon doonaa adigoon ka guurin gurigaaga.
Midabbada midab leh Photoshop.
Maanta waxaan u keenay cashar gaar ah oo Halloween ah, si aan kaaga hor maro. Waxaan ku bari doonnaa inaad timahaaga siiso iftiinno midab leh oo munaasabadda ku habboon.
Khiyaano gacmo leh Photoshop.
Xeelad adiga loogu talagalay adiga oo doonaya inaad ku dhawaaqdo gacmaha, ciddiyaha, nadiifinta. Ama adiga taas oo ah inaad ku raaxeysan karto oo keliya.
Soo bandhigida weelka leh Photoshop.
Soo bandhigida saxan waxay noqon kartaa mid xiiso leh oo dhaqso loo sameeyo. Waa kuwan qaar ka mid ah khiyaanooyinka lagu dayanayo saxan buuxa, oo leh Photoshop.
Muuji sheyga inta ka hartay sawirka
Casharkaan waxaan ku baran doonaa inaad muujiso curiyaha, ama qayb cayiman, sawirka intiisa kale. Iftiin badan, midab badan, saamaynta aad inta badan rabto.
Dayactir sawir leh Saamaynta / Muujinta Muuqaalka
Miyaad sawir qaadatay laakiin waxaa looga tagay nal yar ama in yar ka iftiiminaya intii aad rabtay? Ha tirtirin, halkan waxaan kaa caawinaynaa inaad dayactirto.
Ku xakamee waqtiga fiidiyowga Adobe Premiere
Xakameynta waqtiga fiidiyaha leh Adobe Premiere waa wax aad u fudud in la sameeyo waxayna ku guuleysataa natiijooyin hal abuur leh. Baro tafatirka hal abuurka degdega ah.
Wadahadalka macaamilka ee qaabeynta qaabdhismeedka
Xidhiidhka macaamilka ee qaabaynta qaabdhismeedka ayaa ah qodob aasaasi ah haddii aan dooneyno inaan si karti leh ula shaqeyn karno macaamiisheenna.
Sida fanka ugu dambeeya loogu geeyo macmiilka si sax ah
Sida ugu gudbinta farshaxanka ugu dambeeya macmiilka qaab sax ah oo xirfad leh, iyadoo laga fogaanayo khaladaadka caadiga ah ee naqshadeeye kasta oo yar.
U beddel midabka timaha leh Photoshop si dhakhso leh oo fudud si aad isugu daydo qaabab cusub oo aad u xiiso badan.
Muhiimadda qaababku u leeyihiin astaamaha
Muhiimadda qaababka astaamaha iyo midabkoodu u leeyihiin inay abuuraan sumad kuu gaar ah oo awood u leh in laga aqoonsado adduunka oo dhan.
Qalabaynta maskaxda ama maskax-ka-dhigidda sidii farsamo lagu horumariyo mashaariic muuqaal ah
Qalabaynta maskaxda ama fikirka maskax ahaan sida farsamada lagu horumarinayo mashaariicda garaafka ayaa ku habboon in maskaxda la furo oo laga caawiyo abuuritaanka mashaariic.
Mabaadi'da is-dhexgalka ee naqshadaha moobiilka
Mabaadi'da is-dhexgalka ee naqshadaha moobiilka ee lagama maarmaanka u ah mashruucaaga horumarinta codsiyada casriga ah iyo ku xirnaanta dadweynaha.
La kulan Canva, barnaamijka ugu fudud adduunka ee naqshadeynta
La kulan Canva, barnaamijka ugu fudud adduunka ee naqshadeynta. Qalabka cusub ee webka ee aad u baahan tahay si aad u sameysid naqshadahaaga si fudud.
10 talooyin aasaasi ah oo loogu talagalay shaqadaada ugu horreysa ee naqshadeeye
10 tilmaamood oo fudud oo ku anfacaya si markaa shaqadaadii ugu horreysay u noqoto mid hagaagsan oo markaa waxaad u egtahay xirfad-yaqaan naqshadaysan
80 talooyin ku saabsan sawir qaadista oo ah qaab sawirro ah oo kaa dhigi doona xiddig toogasho ah
Halkan waxaa ku yaal siddeetan talooyin sawiro ah oo kaa caawinaya inaad horumariso dhaqankaaga adduunka toogashada.
Xeerka aragtida: Macnaha iyo eedda masawirka ee sawirka
Miyaad maqashay sharciga indha indheynta sawirka? Ma taqaanaa sida loo dalbado? Nala joog oo soo ogow waxa ay ku saabsan tahay.
Tilmaamo dhawr ah si loo hagaajiyo astaanta oo looga dhigo mid gaar ah
Hagaajinta astaanta ayaa ah ujeedo shirkado gaar ah oo raba inay si isdaba joog ah u soo baxaan
Gawaarida kumbuyuutarka ee ugu waxqabadka badan Sawirka qayb II
Tilmaamo kumbuyuutar oo ficil ah oo Sawir-qaade ah oo loogu talagalay Windows iyo Mac, aad u faa'iido badan si loo helo hufnaan, firfircoonaan iyo wax soo saar
Tilmaamayaasha Sawir-gacmeedka ugu Gacmo-badnaanta Qaybta I
Gawaarida Photoshop ee ugu ficilka badan Windows
Isku soo wada duubida waxyaabaha ugabadan ee adobe Photoshop ee Windows si loo dardar galiyo shaqadeena, loo helo waxtarka iyo wax soo saarka.
Keenista keydka keydka macluumaadka waaweyn PhpMyAdmin
Dhibaatada ugu weyni waxay timaaddaa markaan isku dayno inaan soo dejino xog-ururinno dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, xaaladdan xaddidan xaddidan qaabeynta ayaa la ciyaari doonaa
Maxay tahay inuu naqshadeeye kasta oo garaaf ah ka ogaado daabacaadda
Hel midab madow oo wanaagsan, ku daabac sawir illaa dhiig ... Halkan waxaad ka heli doontaa aqoonta aasaasiga ah ee daabacaadda ee ay tahay inuu naqshadeeye kasta oo garaaf ah ogaado.
8 Khiyaanooyinka Qarsoon ee Dardar Gelin Doonta Hawshaada
Qoraalkan waxaan ku tusi doonaa 8 khiyaanooyin aan micno lahayn oo kaa caawin doona inaad si dhakhso leh u shaqeyso. Way ku badbaadin doonaan xoogaa waqti ah, rumee ama ha rumaysan. Fiiri kuwan!
Naqshadda la qabsiga (naqshadeynta jawaabta)
Halkan waxaa ah 11 talooyin oo maskaxda lagu hayo marka la sameynayo naqshad la qabsi wanaagsan, ama naqshad jawaab celin ah. Fiiro gaar ah u yeelo!
Fonte iyo sida saxda ah ee loo maareeyo
Qoraalkan waxaan uga hadleynaa font iyo sida loo maareeyo, iyadoo talooyin taxane ah ay ka mid yihiin tixraacyada barnaamijyada si loo fududeeyo abaabulkooda.
7 tilmaamo qaabeynta naqshadeeyayaasha
Tilmaamo aad muhiim u ah oo ku saabsan qorista naqshadeeyayaasha: sharci ahaanta, midabka, hal-abuurnimada, bilicsanaanta, cabirka ...
10 Tilmaamood oo si guul leh loogu xirayo qandaraas madaxbanaan
Wareegyada wareegsan ee qaababka leh Sawirka CS5
16 Khiyaanooyinka Photoshop ee bilowga ah
Kuu sheegi maayo waxa Photoshop yahay, maadaama hadda qof walba, ama ku dhowaad qof walba, uu hore u ogaa ...
Ku abuur faylafooliyo wanaagsan 9 tallaabo
Sawirka: Artificalia In FreelanceWitch waxay daabaceen liis ay ku qoran yihiin 9 tallaabo oo la raacayo si faylalkayagu runtii u leeyahay ...
Ma jiraan wax soo degsasho sugitaan ah oo ku saabsan rapishare
Ka soo degsashada feylasha RapidShare adigoon sugin, sida inaad leedahay koontada Rapidshare Premium waa wax ay boggaga qaarkood bixiyaan sida:…